mairie-antananarivo – Direction de Mobilisation des Ressources – DMR –CUA
Nanatanteraka dinik ‘asa niaraka tamin’ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany manao ny asa fivelomana momba ny Karaoke sy Cabaret ary Boites de nuit eto amin’ny tananan’Antananarivo Renivohitra androany maraina ny teo anivon’ny Direction de Mobilisation des Ressources. Nitondra ny fanampim-panazavana mahakasika ireo lalàna mifandraika amin’ny hetra ny teo anivon’ny Direction générale des Impôts avy amin’ny fitondrana foibe.
Fantatra araka ny lalàna laharana 2014 -02 tamin’ny 27 septambra 2014 fa tsy maintsy mandoa hetra amin’ny fanjakana ireo rehetra mivelona amin’ireo asa voatanisa tetsy ambony,ka ny 50% n’izany dia mankany amin’ny Faritra,ny 30% mankany amin’ny Kaominina ary ny 20% mankany amin’ny Faritany araka ny didim-pitondrana navoakan’ny faritra.
Voalazan’io didim-pitondrana io,ho an’ireo olona mpanao Karaoké fa raha latsatsy ny 25 m² ny toerana iasana dia 30 000 Ariary isam-bolana no aloa, 40 000 Ariary isam-bolana raha 25 m² ka hatramin’ny 75 m² ny toerana iasana ary 80 000 Ariary isam-bolana kosa raha mihoatra ny 75 m².
Ho an’ireo tompona Cabaret sy boites de nuit kosa dia vola 100 000 Ariary isam-bolana no hetra tokony alohan’izy ireo amin’ny fanjakana.
Votoatin’izao dinidinika niarahana tamin’ny CUA izao ny fampahafantarana ny rehetra ireo dingana tokony hatao raha handoa hetra izy ireo,teo ihany koa ireo fanentanana ireo manao ity asa fivelomana ity mba hiditra ao amin’ny sehatry ny ara-dalàna.